TSY FANAJANA NY STADIUM BARIKADIMY : Nanao fitsidihana tampoka ny Minisitra Tinoka Roberto
Ny marainan’ny alakamisy 6 febroary lasa teo, dia nanao fitsidihana tampoka ny kianja manara-penitra stadium Barikadimy ao Toamasina ny Minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena, Tinoka Robeto. 7 février 2020
Nandritra izany no nahitany fa efa misy fahasimbana sahady ireo kojakoja ao anatiny vokatry ny tsy fahaizan’ireo mpampiasa ity kianja ity mikojakoja ny fotodrafitrasa. Ho an’ny efitrano fidiovana, dia maloto tanteraka. Raha tsiahivina, taorian’ny fandalovan’ny Filoham-pirenena tao amin’ity kianja ity ny 24 novambra 2019, dia nisy ny fangatahana nataon’ireo mpanao fanatanjahantena sasany ny amin’ny tokony hampiasana sahady io stadium io.
Izao anefa ny vokany. Nambaran’ny minisitra Tinoka Roberto nandritra izao fitsidihana tampoka nataony izao fa mbola tsy vita tanteraka ny asa fanamboarana ny stadium Barikadimy fa mbola misy asa fanampiny izay mbola ataon’ny orinasa nanao azy. Manolotra fotodrafitrasa tsara ho antsika ny Filoham-pirenena ka aoka samy hahay hitandrina sy hikoja ny efa azo, hoy hatrany ny minisitra Tinoka Roberto nandritra izao diany tao Toamasina izao.